Ungayisebenzisa kanjani imiphumela emisha yemilayezo ku-iOS 10 (I) | Ngivela kwa-mac
Ngokufika kwe-iOS 10, Imilayezo inamathuluzi namakhono amaningi wokudala ezisinikeza abasebenzisi izindlela ezintsha zokuveza imizwa yethu nokuxhumana nabangane nomndeni wethu. Ngaphezu kwakho konke, yenza izingxoxo zijabulise ngempela.
Izici ezintsha zifaka izinhlobo ezahlukahlukene ze- imiphumela ye-bubble, kungenzeka ukhiphe i- ukusabela mayelana nemibhalo noma izithombe ezithunyelwe kithi, imiphumela yesikrini esigcwele njengeziqhumane, amabhaluni, inkanyezi yokudubula, nezinye izici. Ngokulandelayo sizobona ukuthi singayisingatha kanjani yonke le miphumela emisha futhi sicebise izingxoxo zethu ngemilayezo ku-iOS 10.
Wonke la mathuluzi esiwabalulile ngenhla kulula kakhulu ukuwasebenzisa, kepha kufanele uwazi. Futhi, ezinye zazo "zifihliwe" ngakho-ke ukuzithola kungaba nzima. Ngalesi siqondiso ngeke kube nomphumela owaziwayo. Asiye lapho!
1 Ungayisebenzisa kanjani imiphumela ye-bubble kumilayezo
1.1 Itholakala kanjani imiphumela?
2 Ungayisebenzisa kanjani imiphumela yesikrini esigcwele
Ungayisebenzisa kanjani imiphumela ye-bubble kumilayezo
Okwamanje akhona izinhlobo ezine ezihlukene zemiphumela ye-bubble. Zonke zingangezwa kunoma imuphi umbhalo, isithombe, njll esizokuthumela koxhumana nabo. Umqondo ukukhombisa isimo esithile sengqondo kanye nokuqukethwe komyalezo okukhulunywa ngawo. Le miphumela emine ye-bubble yile:
Ngamunye wabo uzoshintsha indlela ibhamuza eliqukethe umlayezo elethwa ngalo kumamukeli.
Itholakala kanjani imiphumela?
El "ukuphoqa" umphumela, ngokwesibonelo, ikhulisa ubukhulu bebhamu lengxoxo futhi ihambise ngasikhathi sinye esikrinini; cabanga ukuthi kuyinto efana nokushaya itafula. Ngokwesinye isandla, umphumela "wokumemeza", ikhulisa ibhamuza yengxoxo futhi iyenze inyakaze imizuzwana embalwa ngaphambi kokubuyela esimeni sayo esijwayelekile.
El "ukuthamba" umphumela Kwenza umbhalo ozungezelwe ngaphakathi kwebhamuza yengxoxo ube mncane imizuzwana embalwa ngaphambi kokunwebeka kusayizi ojwayelekile. Khonamanjalo yena "uyinki ongabonakali" umphumela uwufihla ngokuphelele umlayezo, noma ngabe uluhlobo luni, futhi kuzobonakala kuphela njengoba umamukeli womyalezo ehambisa umunwe phezu kwawo.
Ake sibone ukuthi ungayisebenzisa kanjani le miphumela emisha ye-bubble kumilayezo ku-iOS 10:
Vula uhlelo lokusebenza lwemilayezo bese ukhetha ingxoxo noma qala ingxoxo entsha.
Kuma-iPhone 6s noma ama-6s Plus, kanye no-7 no-7 Plus, sebenzisa amandla okucindezela kumcibisholo oluhlaza okwesibhakabhaka ongakwesokudla sebhokisi lombhalo ukwenza izinketho zomphumela webhamuza zivele.
Kuma-iPhones noma ama-iPads wangaphambilini, mane ubambe umunwe wakho kumcibisholo amasekhondi ambalwa ukuletha izinketho zomphumela webhamuza.
Khetha eyodwa yezinketho zomphumela webubble futhi ungabona ukubuka kuqala kwalokho okuzobonwa ngumamukeli wakho.
Cindezela umcibisholo oluhlaza okwesibhakabhaka ukuthumela umyalezo ngomphumela okhethiwe.
Ungayisebenzisa kanjani imiphumela yesikrini esigcwele
Imiphumela ye-bubble ishintsha ukubukeka nokuziphatha kwamabhamuza lapho imilayezo esiyithumelayo ifakiwe khona. Ngakolunye uhlangothi, imiphumela yesikrini iguqula okwesikhashana ukubonakala kwayo yonke imilayezo yesikrini ngokugqwayiza kwesikrini esigcwele okungalalelwa kanye nemiyalezo ethunyelwayo.
Ukuze usebenzise le miphumela kusikrini esigcwele, kufanele ulandele izinyathelo ezilandelayo:
Ku-iPhone 6s noma ku-6s Plus, kanye naku-7 no-7 Plus, sebenzisa amandla okucindezela kumcibisholo oluhlaza okwesibhakabhaka ongakwesokudla sebhokisi lombhalo ukuletha izinketho zomphumela webhamuza nemenyu ye-Screen Effect.
Kuma-iPhones amadala noma ama-iPhones, mane ubambe umunwe wakho kumcibisholo amasekhondi ambalwa ukuletha izinketho zomphumela we-bubble nemenyu ye-Screen Effect.
Inketho ezenzakalelayo yimiphumela ye-Bubble. Thepha ku- "Imiphumela Yesikrini" ngaphezulu kwesikrini ukuze ushintshele kule modi.
Swayipha kwesobunxele nakwesokudla ukuze uskrole izinketho ezahlukahlukene.
Uma ukhethe umphumela oyifunayo, cindezela umcibisholo oluhlaza okwesibhakabhaka ukuthumela umyalezo wakho. Izokwethulwa kumamukeli njengokugqwayiza kwesikrini esigcwele.
Sisenemiphumela embalwa esingayithola, kepha lokho kuzoba yingxenye yesibili yalokhu okuthunyelwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungayisebenzisa kanjani imiphumela emisha yemilayezo ku-iOS 10 (I)